जनार्दन शर्मालाई चप्पलले हिर्काउने निर्मला भन्छिन्: सहिद र बेपत्ता परिवारबारे सोच्नु पर्दैन ? — Imandarmedia.com
‘अस्ती मात्र विद्यालय पढ्न गएको मेरो सानो १४ वर्षको भाइ पूर्णलाई विप्लव निकट नेकपाको विद्यार्थी संगठनमा बस्यो भनेर जनार्दनले पक्राउ गर्न लगाएर ३९ दिन हिसासतमा राखे ।’ उनले गम्भीर हुँदै आक्रोशित स्वरमा भनिन् – ‘बुवाको अवस्था पनि त्यस्तै छ, मलाई यस्तै कुराले रिस उठ्यो र उनलाई सार्वजनिक स्थानमा चप्पल हाने ।’
उनले जनार्दन शर्मालाई चप्पल प्रहार गर्नुको अर्को कारण खोलिन– ‘कार्यक्रम कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाँदा जनार्दन भाषण गर्दैथिए । अनि नजिकै गएर केहीबेर सुनेँ पनि। उनले भाषणमा भनेका कुरा र साच्चै व्यवहारमा लागु हदै आएका कुराबीच त आकाश पातालको फरक छ नी । गफ मात्र दिएर हुन्छ ? मैले नजिकैबाट प्रहार गरेको चप्पलका कारण उनको ज्याकेटमा धुलोको छाप मात्र बस्यो । अनि हल्लाखल्ला मच्चियो । मलाई अरु क-कसले धकेलपकेल पनि गरे । त्यसपछि महिला प्रहरीहरूले समातेर लगे ।’
यता जनार्दन शर्माको कार्यक्रम स्थलमै भएका रुकुमका पत्रकारहरुले समेत यो घटनालाई लुकाउन धेरै प्रयत्न गरे । सल्हा गरेर नै यो घटनालाई जति सक्यो सामान्यकरण गर्दै जाने र हैन भन्दै जाने भनिएको रैछ । केही पत्रकारहरुले त इमान्दार मिडियाको समाचार लिंकमै कमेन्ट गर्दै केही घण्टासम्म समाचार साचो हुदै हैन भन्दै जनार्दनले दिएको योजना कार्यन्वयन गर्ने कोशिस पनि गरे ।
अन्ततः जनार्दन शर्माको निकै बेईज्जेत हुने अबस्था आएपछि माओवादी र एमालेका स्थानीय नेताहरुकाे सल्लामा तल्काल निर्मलालाई रिहाई गरिएको माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ताले नै मुख खाेलेकाे छन ।